Ny toeram-pitrandrahana an'i King Solomon (fizarana 16) - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
haino aman-jery > Journal succession > 2015-04 mpandimby ny Magazine > Ny Harenan'i Solomona Mpanjaka (ampahany 16)
Nitsidika ny tranon'ny ray aman-dreniko sy ny sekoliko aho vao haingana. Niverina ny fahatsiarovana ary naniry ny andro taloha tsara aho. Fa tapitra ny andro. Nanomboka ary nijanona ny akanin-jaza. Ny mari-pahaizana avy any an-tsekoly dia midika veloma sy handraisana traikefa fiainana vaovao. Ny sasany tamin'ireo traikefa ireo dia nampientam-po, ny hafa naharary ary nampatahotra aza. Na tsara na ratsy, na fohy na ela, dia nianatra zavatra iray aho: ny hijanona eo amin'ilay lalana, satria ny fiovana tafiditra dia ampahany amin'ny fiainantsika.
Ivon’ny Baiboly koa ny hevitra momba ny dia. Ny Baiboly dia milazalaza ny fiainana ho toy ny lalana misy fotoana sy traikefa samihafa eo amin’ny fiainana izay misy fiandohana sy fiafarana. Miresaka momba ny fandehanana eto ny Baiboly. Niara-nandeha tamin’Andriamanitra i Noa sy Enoka (1. Mosesy 5,22- enina ambin'ny folo; 6,9). Rehefa 99 taona i Abrahama, dia nasain’Andriamanitra nandeha teo alohany izy (1. Mosesy 17,1). Taona maro tatỳ aoriana, dia nandeha teny an-dalana niala tamin’ny fanandevozan’ny Ejipsianina nankany amin’ny tany nampanantenaina ny Isiraelita.
Ao amin’ny Testamenta Vaovao, i Paoly dia mamporisika ny kristiana hiaina amim-pahamendrehana amin’ny fiantsoana izay niantsoana azy ireo (Efesiana). 4,1). Nilaza i Jesosy fa Izy no lalana ary manasa antsika hanaraka azy. Ireo mpino voalohany dia niantso ny tenany ho mpanara-dia ny fomba vaovao (Asan’ny Apostoly 9,2). Mahaliana fa ny ankamaroan’ireo dia resahin’ny Baiboly dia mifandray amin’ny fandehanana miaraka amin’Andriamanitra. Noho izany: mandehana amin’Andriamanitra ary miara-mandeha Aminy mandritra ny fiainanao.
Tena zava-dehibe ny hoe mihetsiketsika ny Baiboly. Noho izany dia tsy tokony hahagaga antsika raha misy teny malaza natokana ho an’ity lohahevitra ity: “Matokia an’i Jehovah amin’ny fonao rehetra, ary aza miantehitra amin’ny fahalalanao, fa tsarovy Izy amin’ny alehanao rehetra, dia hitari-dalana anao Izy . » (Ohabolana 3,5-6)
"Miantehitra amin'ny Tompo amin'ny fonao rehetra", hoy i Solomona ao amin'ny andininy faha-5, "ary aza miantehitra amin'ny sainao" ary "amin'ny alehanao rehetra" tadidio izy. Ny lalana eto dia midika hoe fitsangatsanganana. Manana fitsangatsanganana manokana manokana isika rehetra, dia fitsangatsanganana amin'ity dia amin'ny fiainana lehibe ity. Làlana izay miampita amin'ny fitsangatsaran'ny olona hafa. Ny fitsangatsanganana dia misy ny fanovana fifandraisana sy ny fotoana hisian'ny aretina sy ny fahasalamana. Manomboka ny dia ary miainga ny dia.
Milaza ny Baiboly momba ny dia maro nataon'ny olona, ​​toa an'i Mosesy, Joseph ary David. Nandeha tany Damaskosy ny apostoly Paoly, rehefa niatrika an'i Jesosy nitsangana tamin'ny maty. Tao anatin'ny fotoana vitsy monja, niova be ny lalan'ny diany - tamin'ny lafiny maro. Ny dia sasany dia toy izany. Tsy manomana izany izahay. Omaly dia nandeha tamin'ny lalana iray ary androany niova ny zava-drehetra.Ny Paulus dia nanomboka ny diany ho mpifanandrina amin'ny finoana kristiana feno fahasiahana sy fankahalana ary fikasana hamongorana ny kristianisma. Namarana ny diany tsy tany kristiana ihany izy fa tamin'ny naha olona nanaparitaka ny vaovao tsaran'i Kristy manerana izao tontolo izao tamin'ny dia maro sy sarotra ny dia. Ahoana ny dianao? Mankaiza ianao?
Ny fo fa tsy lohany
Ao amin'ny andininy fahenina no ahitantsika valiny hoe: "tsarovy." Ny teny hebreo hoe jada dia midika hoe mahalala na mahalala. Teny manan-danja lehibe izy io ary tafiditra ao ny hoe mahalala olona amin'ny alàlan'ny fandinihana, fandinihana sy traikefa. Ny mifanohitra amin'izany dia ny mifankahita olona amin'ny alàlan'ny antoko fahatelo. Ny fahasamihafana misy eo amin'ny fifandraisan'ny mpianatra amin'ny lohahevitra ianarany - sy ny fifandraisan'ny mpivady. Ity fahalalana momba an'Andriamanitra ity dia tsy hita ao an-dohantsika fa indrindra ao am-pontsika.
Ka hoy i Solomon fa ho fantatrao Andriamanitra (jada) raha mandeha aminy ny fiainanao ianao. Ity tanjona ity dia mandritra ny fotoana rehetra ary ny fahalalana an'i Jesosy amin'ity dia ity sy ny fahatsiarovana an Andriamanitra amin'ny lafiny rehetra. Amin'ny fitsangatsanganana rehetra kasaina sy tsy kasaina, amin'ny dia izay lasa lalan-kivoana satria diso lalana no nalehanao. Tian'i Jesosy hiaraka aminao amin'ny dia isan'andro amin'ny fiainana mahazatra ary ho sakaizanao.
Ahoana no ahazoantsika izany fahalalana izany avy amin’Andriamanitra? Nahoana raha mianatra avy amin’i Jesosy ka mitady toerana mangina, lavitra ny eritreritra sy ny zava-mitranga isan’andro, izay andanianao fotoana eo anatrehan’Andriamanitra isan’andro, ary nahoana raha vonoina mandritra ny antsasak’adiny ny tele na ny telefaonina? Manokàna fotoana hitokanana amin’Andriamanitra, hihainoana azy, hitoetra ao aminy, hisaintsainana sy hivavaka aminy (Salamo 3 Des.7,7). Mamporisika anao aho hamaky ny Efes3,19 ataovy izany ho vavaky ny fiainanao manokana. Mivavaka ho an’izany i Paoly: “mba hahalalana ny fitiavan’Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra, mba hamenoana antsika amin’ny fahafenoan’Andriamanitra rehetra.
“Nilaza i Solomona fa hitari-dalana antsika Andriamanitra. Na izany aza, tsy midika akory izany fa ny lalana lalantsika miaraka amin'Andriamanitra dia ho mora, tsy misy fanaintainana, fijaliana ary tsy fandriam-pahalemana. Na dia amin'ny fotoan-tsarotra, Andriamanitra dia hamelona sy hampahery ary hitahy anao amin'ny alàlan'ny fanatrehany sy ny heriny.
Vao haingana no niantso ahy ny zafikeliko vavy Dadabe. Nivazivazy tamin'ny zanako lahy aho hoe: "Vao tamin'ny volana lasa aho tamin'izaho mbola tanora. Herinandro lasa ray aho ary ankehitriny raibe aho - aiza ny fotoana sisa? » Mandalo ny fiainana. Fa ny ampahany rehetra amin'ny fiainana dia dia lalana ary na inona na inona mitranga ao amin'ny fiainanao dia io ny dianao. Ny hahafantarana an'ity dia ity no tanjonao.